ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – Askstyle
ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
ပ်ိဳေမေတြရဲ့အသည္းေက်ာ္ အဆိုေတာ္ အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံမွာပါ ခ်စ္ခင္အားေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို “တကယ္ကိုမထင္ထားပဲ ထိုင္းနိုင္ငံကေကြကာအုပ္ ေလးေတြရွိတာ အခုမွပဲသိေတာ့တယ္…. အရမ္းေပ်ာ္ပီးဝမ္းသာမိတယ္ဗ်ာ” လို့ သူ႔ရဲ့လူမွုကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ကိုေတာ့ commercial တစ္ခုေၾကာင့္ေရာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီကမွ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ့နာမည္ႀကီး အလွကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္တစ္ခုရဲ့ Brand Ambassador တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံကို ပြဲေတြလည္းတက္ေရာက္ရမယ္၊သီခ်င္းေတြလည္း ဆိုသြားဖို့ရွိတယ္လို့ ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ အခုလိုထိုင္နိုင္ငံမွာ အႏုပညာအလုပ္လုပ္ရတဲ့အေပၚမွာလည္း ထိုင္းစာေတြလည္း သင္မယ္၊ ထိုင္းသီခ်င္းေလးနည္းနည္းပါးပါးရေနၿပီးမို့ ထိုင္းသီခ်င္းေတြလည္း ဆိုျပမယ္လို့ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံကို အခုလိုပထမဆုံးအႏုပညာေတြ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္တဲ့လို့ ေျဖၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။
အုပ္စိုးခန႔္ဟာ ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရင္ထဲေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ “အိမ္မက္ေတြမိုးထားတဲ့အိမ္” ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါေသးတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ အုပ္စိုးခန႔္ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာမက ထိုင္းနိုင္ငံမွာပါ သူ႔ရဲ့အမာခံဖန္ေတြျဖစ္တဲ့ ေကြကာအုပ္ေလးေတြရွိပါတယ္တဲ့ေနာ္။
ပျိုမေတွေရဲ့အသည်းကျော် အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “တကယ်ကိုမထင်ထားပဲ ထိုင်းနိုင်ငံကကွေကာအုပ် လေးတွေရှိတာ အခုမှပဲသိတော့တယ်…. အရမ်းပျော်ပီးဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကိုတော့ commercial တစ်ခုကြောင့်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကမှ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး အလှကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တစ်ခုရဲ့ Brand Ambassador တစ်ယောက်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို ပွဲတွေလည်းတက်ရောက်ရမယ်၊သီချင်းတွေလည်း ဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ အခုလိုထိုင်နိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်း ထိုင်းစာတွေလည်း သင်မယ်၊ ထိုင်းသီချင်းလေးနည်းနည်းပါးပါးရနေပြီးမို့ ထိုင်းသီချင်းတွေလည်း ဆိုပြမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို အခုလိုပထမဆုံးအနုပညာတွေ စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
အုပ်စိုးခန့်ဟာ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ “အိမ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ သူ့ရဲ့အမာခံဖန်တွေဖြစ်တဲ့ ကွေကာအုပ်လေးတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်။